कांग्रेसलाई जिताउन केपी ओलीले कुनै हालतमा चुनाव गर्दैनन् : प्रदीप पौडेल | Hindu Khabar
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कुनै पनि हालतमा आगामी वैशाखमा चुनाव हुन नहुने बताएका छन्। मंगलबार नागरिक नेटवर्कका लागि प्रशान्त लामिछानेसँग कुराकानी गर्दै नेता पौडेलले असंवैधानिक तवरबाट हुन लागेको चुनाव हुन नुहने बताए।
नागरिकसँग अन्र्तवार्ता दिदै नेता पौडेलले निर्वाचन आयोग कसैबाट निर्देशित भएकोे दाबी समेत गरे। ‘निर्वाचन आयोगको नियती पनि राम्रो देखिन्न। प्रचण्डजीले केपी ओली हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न भनिरहनुभएको छ। केपी ओलीजीले प्रचण्ड हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष होइन भनिसक्नुभएको छ,’ उनले भने,‘तर, निर्वाचन आयोगल जबरजस्ती केपी ओली पनि अध्यक्ष हो, प्रचण्ड पनि अध्यक्ष भनिरहेको छ। उसले त फाइल हेरेर, विधि विधान हेरेर निर्णय गर्ने होइन र? यस्तो निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ? त्यसैले निर्वाचन आयोग पूर्णरुपमा कसैबाट निर्देशित छ। यस्तो निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँदैन।’